Global Voices teny Malagasy · Janoary 2009
Tantara misongadina tamin'ny Janoary 2009
Madagasikara31 Janoary 2009
Madagasikara27 Janoary 2009
Tantara tamin'ny Janoary, 2009
Amerika Latina 31 Janoary 2009
Nipaka tao am-pon'ny Costa Rica ny Horohoron-tany 6.2, izay nanana ivo-kotroka (epicentre) 35Km fotsiny tao Vara Blanca. Miala amin'ny renivohitry San Jose. Tao amin'ny lemaka afovoany, dia nahitana fahavakisana sy entana ravarava niparitaka eny amin'ny talatalana, na dia izany aza, dia ny toe-javatra manakaiky ny ivo-kotroka no tena lasibatra, tahaka izany koa ireo tendrombohitra an-dafin-toerana nianjera ary ireo fihotsahan'ny tany noho ny dibo-drano. Azo fantarina aloha ny mety iharan'ny loza, fa hatreto kosa dia 3 no voamarina fa maty.
Fanabeazana 27 Janoary 2009
Bolivia: Mifampitana @ Tazo Dengy
Amerika Latina 24 Janoary 2009
Nandrava ny fambolena sy ny tranon'olo-tsotra noho ny fiakaran'ny rano ny fiavian'ny orana any amin'ny faritra atsinanan'i Bolivia. Etsy ankilan'izany dia mamorona toeram-pitomboan'ny moka mpampiely ny tazon'ny dengue io orana io. Ao anatin'ny fambaran'aretina ny aretin'andoha ny hozatra ary ny ratsam-batana. Fa misy ihany koa ny soritr'aretina izay henjakenjana kokoa...